Maqaalka Liza Knotko Martech Zone »
Maqaallada by Liza Knotko
Liza Knotko waa Maamulaha Suuqgeynta entontent SplitMetrics, aaladda A / B ee qalabka baaritaanka ah oo ay ku kalsoon yihiin Rovio, MSQRD, Prisma iyo Zeptolab. SplitMetrics waxay ka caawisaa kuwa soo saara barnaamijyada moobiilka inay jabsadaan isku hagaajinta dukaanka iyagoo adeegsanaya tijaabooyinka A / B iyo falanqaynta natiijooyinka.
Jimcaha, Agoosto 4, 2017 Khamiis, Agoosto 3, 2017 Liza Knotko
Waqtiga Akhrinta: 5 daqiiqo Marxaladda horay-u-bilaabidda waa mid ka mid ah xilliyada ugu muhiimsan ee nolosha barnaamijka. Daabacayaashu waa inay la macaamilaan shaqooyin tiro badan kuwaas oo gelinaya maareynta waqtigooda iyo xirfadaha dejinta mudnaanta imtixaanka. Si kastaba ha noqotee, aqlabiyad badan oo ka mid ah suuqleyda barnaamijka ayaa ku guuldareystay inay ogaadaan in imtixaanka A / B ee xirfad leh uu u fududeyn karo waxyaabaha iyaga oo ka caawin kara hawlo kala duwan oo horay u bilaabid ah. Waxaa jira dariiqooyin badan oo daabiciyeyaashu u adeegsan karaan imtixaanka A / B ka hor barnaamijkooda ugu horreeya